Home » အသားပေး » 2019 NAB Show မှာကျင်းပမည့်ဒုတိယအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်ခရီးသွားခြင်း VIDEO Awards
- မှာပြားထည့်သွင်းရန် Expanded မိတ်ဖက် NAB ပြရန် နယူးယောက် -
ဝါရှင်တန်ဒီစီ - အဆိုပါခရီးသွားဗီဒီယိုဆုပေးပွဲ (TVAs) ကိုထပ်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် Las Vegas မှာဧပြီလ9ပေါ်မှာ။ မှဖန်တီးသည် Citizine ကွန်ယက်, Incအဆိုပါဆုလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့် 2018 အတွက်ဖြန့်ချိဆန်းသစ်နှင့်ဖှယျခရီးသွားဗီဒီယိုများအားချီးမြှောက်။
NAB ပြရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနီးပါး 100,000 မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ထပ်ဆုအစီအစဉ်၏ပစ္စုပ္ပန်စပွန်ဆာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ NAB ပြရန် အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ဧပြီ 6-11 ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ TVAs နှစ်ခုအပုဒ်အတွင်းပုံမှန်ရုပ်ရှင်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုအသိအမှတ်မပြု။ self-ငွေကြေးထောက်ပံ့စီမံကိန်းအတွင်းအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် လွတ်လပ်သော Track။ အဆိုပါခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကနေစီမံကိန်းများ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Track။ တစ်ခုချင်းစီကိုခြေရာခံရာမှဆုရရှိသူဂုဏ်ထူးဆုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါခြေသလုံး Award ဆုနှစ်ခုပရိတ်သတ်ဆုပေးပွဲ၏ဆုရရှိသူငွေသားဆုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
"မနှစ်ကရဲ့ခရီးသွားဗီဒီယိုဆုပေးပွဲကမ္ဘာအနှံ့ 400 နိုင်ငံများမှနီးပါး 26 entries တွေကိုထည့်သွင်း," Citizine တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူဖိလိပ္ပု DeBevoise ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ 2019 မှာအောင်မြင်မှုချွတ်တည်ဆောက်ခြင်းမျှော်လင့် NAB ပြရန် နှင့်လာမည့်ရက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ခရီးသွားမီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များဆက်သွယ်ထားသော NAB ပြရန် နယူးယောက်။"
Citizine တင်ပြပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ $ 1 ထရီလီယံခရီးသွားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဗီဒီယိုကို The Power of အဆိုပါ 17 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အောက်တိုဘာလ 2018 အပေါ် Show ကိုနယူးယောက် NAB ကွန်ဖရအစီအစဉ်သည်။ အဲဒီ session စားသုံးသူခရီးသွားအသုံးစရိတ်ဗီဒီယို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်နှင့်မည်သို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုပေး, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သြဇာအကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ content တွေကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ငွေရရှိအောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ session ပြီးနောက် Citizine တစ်ဦးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် networking ဧည့်ခံ ဘယ်မှာတက်ရောက်ခရီးသွားများနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဖန်တီးမှုနှင့်စျေးကွက်အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။
အားလုံးဗီဒီယိုကိုတင်ပြထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 31, 2018 အကြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာ။ TVA လက်ရှိဇန်နဝါရီလ 13, 2019 မှတဆင့်တင်ပြလက်ခံသည်။
အဆိုပါဆုနှင့် ပတ်သက်. အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင် ဒီမှာ။ အကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် NAB ပြရန် နယူးယောက်ဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit က Ultra HD ဖိုရမ်	2018-10-30
ယခင်: ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာညီလာခံအတွက်စက္ကူအဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံခြင်း NAB SHOW
နောက်တစ်ခု: Nugen အသံရဲ့ Halo Upmix Netflix ရဲ့, Hill ကအိမ်၏သရဲခြောက်သည်ကြောက်စရာကောင်းသောရလဒ်များဘဝမှကယျတငျ